Homeसमाचारघरबेटीकी छोरीसंग लभ परेपछि डेरावाल प्रेमीको यस्तो हा’लत (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 26, 2021 admin समाचार 2731
सिन्धुलीका हरी बराल केही वर्ष अघि वैदे’शिक रोजगारीका लागि कतार गएका थिए । काठमाडौमा प’सल गरेका थिए । उनले श्रीमतीलाई पसलको जि’म्मा दिएका थिए । नाक कानमा गहना पनि बनाइ’दिएका थिए । उनी २१ महिना पछि कतार’वाट विदेशवाट फर्किए । उनलाई श्रीमती अनु वराल विमा’नस्थलमा लिन गइन् । उनको नाक कान सबै रित्तै देखेपछि के गर्यौ सुन भनेर सोधे ? श्रीमतीले सुन मात्र होइन पसल पनि बे’चेको रहेछ ।
श्रीमतीले खर्च चाहि’एर पसल सकेँ भने पछि उनी चुप लागेर बसे । शिक्षण अस्पताल महारा’जगन्ज नजिक उनी जसको घरमा भाडा बस्थे त्यही घरकी छोरीसंग प्रेम भएपछि विवा’ह गरेका थिए । अनुको मुख्य घर इलाम हो । फर्निच’रमा काम गर्न र सिक्न भन्दै भाडामा बसेका थिए । त्यही बेला अनुसं’ग प्रेम भएको थियो ।
विदेशवाट आएको दुई वर्ष पछि फाइना’न्सवाट एक जना चिनेको मानिसले फोन गरे । तिम्रो श्रीमतीले दुई वर्ष अघि ५० हजार रुपैया लिए’की थिइन् अहिले सम्म ब्याज पनि तिरेको छैन । त्यसको व्याज सहित गरेर एक लाख रुपैया पुगे’को छ पैसा तिर भने पछि उनी छाँगावाट खसे’जस्ता भए ।
श्रीमती’लाई फेरी पैसाको बारेमा सोधे । श्रीमतीले सिधै मैले खाँए भनेर जवाफ दिइन् । अहिले उन’को छोरा १३ वर्षको छ भने छोरी ३ महिनाकी छन् । अहिले छोरी लिएर श्रीमती हिँडेपछि श्रीमान खोजीको लागि मिडि’या सामु आएका छन् । उनी पाल्पा गएर फर्केका थिए । कोठावाट ५ मिनेटको दुरीमा श्रीम’ती फेला परिन । कता जान लागेको ?
भनेर श्रीमती’लाई सोध्दा मेरो अचानक पेट दुख्यो शिक्षण अस्पताल जान लागेको भनेर सुनाए पछि उनी आफै छोड्न जान खो’जेका थिए । तर श्रीमती एक्लै गइन् । राती करिब १० वजे उनी वाहिर निस्केका थिए । अनि राती करिब १ वजे फर्कदा श्रीमती पनि कोठामा छैनन् कोठामा केही सा’मान पनि छैन । छोरी समेत श्रीमती हरा’एपछि अहिले उनी खोजीमा ला’गेका हुन् । इताजा खबरबाट
February 10, 2021 admin समाचार 4389
March 21, 2021 admin समाचार 3045
अभिनेता निखिल उप्रेती, ‘जात्रा’ निर्देशक प्रदीप भट्टराई, कवि एवम् गीतकार दिनेश अधिकारी एक’साथ सम्मा’नित भएका छन् । शनिबार सर्लाहीको हज’रियास्थित खेल मैदानमा आयोजित ‘सर्लाही स्वर्णिम सम्मान २०७७’ कार्यक्रममा उनीहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै
March 22, 2021 admin समाचार 3709